ထပ်ခါတလဲလဲပါဝင်သောပြစ်ဒဏ် - ဒဏ္Myာရီ၊ အမှန်တရားနှင့်ကျွန်ုပ်၏အကြံဥာဏ် | Martech Zone
ထပ်ဆင့်ပါဝင်သောပြစ်ဒဏ် - ဒဏ္Myာရီ၊ အမှန်တရားနှင့်ကျွန်ုပ်၏အကြံဥာဏ်
ကြာသပတေးနေ့, မတ်လ 25, 2021 အင်္ဂါနေ့, သြဂုတ်လ 24, 2021 Douglas Karr
ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်အတွင်းဂူဂဲလ်သည်ထပ်ဆင့်အကြောင်းအရာပြစ်ဒဏ်၏ဒဏ္myာရီကိုတိုက်ခိုက်နေသည်။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်မေးစရာမေးခွန်းတွေဆက်ပြီးမေးနေတုန်းပဲ၊ ဒီနေရာမှာဆွေးနွေးရကျိုးနပ်မယ်လို့ထင်တယ်။ ပထမ၊ စကားစုကိုဆွေးနွေးကြစို့။
Duplicate content သည်ယေဘူယျအားဖြင့်အခြားအကြောင်းအရာများနှင့်လုံးဝကိုက်ညီမှုရှိခြင်းသို့မဟုတ်၎င်းသည်အတော်အတန်တူညီသည်ဖြစ်စေ domains များအတွင်း၌သို့မဟုတ်ဖြတ်သန်းသွားသောအကြောင်းအရာများ၏ထိရောက်သောလုပ်ကွက်များကိုရည်ညွှန်းသည်။ အများအားဖြင့်၎င်းသည်မူလအစတွင်လှည့်စားမှုမဟုတ်ပါ။
ပြစ်ဒဏ်ဆိုသည်မှာသင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုရှာဖွေခြင်းရလဒ်များမှာလုံး ၀ စာရင်းမဝင်တော့ဘူး၊ (သို့) သတ်သတ်မှတ်မှတ်သော့ချက်စာလုံးများပေါ်တွင်သင်၏စာမျက်နှာများကိုသိသိသာသာလျှော့ချထားခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ မရှိ။ ကာလ။ ဂူဂဲလ် 2008 ခုနှစ်တွင်ဤဒဏ္ာရီဖျက်သိမ်း လူအများစုကဒီနေ့အထိတိုင်ပင်ကြတယ်။
ဒါကိုတစ်ချိန်ကအပြီးအပိုင်တင်ကြစို့။ ရှေးဟောင်းတို့၊ “ ထပ်ခါတလဲလဲပါဝင်သောပြစ်ဒဏ်” ဟူ၍ မရှိ။ အနည်းဆုံးတော့လူအများစုပြောသည့်အခါထိုသို့ပြောခြင်းမဟုတ်ပါ။
ဂူဂဲလ်, အထပ်တူအကြောင်းအရာပြစ်ဒဏ် Demystifying
တစ်နည်းပြောရလျှင်၊ သင့် site ပေါ်တွင်ထပ်ဆင့်အကြောင်းအရာများ၏တည်ရှိမှုသည်သင်၏ site ကိုအပြစ်ပေးရန်မဟုတ်ပါ။ ရှာဖွေမှုရလဒ်များတွင်သင်ပြသနိုင်ပြီးထပ်တူအကြောင်းအရာများပါသည့်စာမျက်နှာများကိုပင်အဆင့်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
အသုံးပြုသူများသည်ရှာဖွေမှုရလဒ်တစ်ခုစီတိုင်းမှတန်ဖိုးရှိသောသတင်းအချက်အလက်များကိုရှာဖွေသည့်၎င်း၏ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တွင်ဂူးဂဲလ်သည်သာလွန်ကောင်းမွန်သောအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုလိုချင်သည်။ အကယ်၍ ရှာဖွေမှုအင်ဂျင်တစ်ခု၏ရလဒ် (၁၀) ချက်သည် အကယ်၍ ရှာဖွေမှုအင်ဂျင်၏ရလဒ် (၁၀) ချက်ပေါ်လာပါကထပ်ဆင့်သောအကြောင်းအရာများသည်ထိုအတွေ့အကြုံကိုပျက်စီးစေသည်SERP) တူညီတဲ့အကြောင်းအရာရှိခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းသည်အသုံးပြုသူကိုစိတ်ပျက်စေပြီးရှာဖွေရေးရလဒ်များကိုလွှမ်းမိုးရန်အကြောင်းအရာလယ်ယာမြေများကိုတည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်သော blackhat SEO ကုမ္ပဏီများကရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏ရလဒ်များကိုစားသုံးလိမ့်မည်။
ထပ်တူအကြောင်းအရာ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏ရလဒ်များကိုလှည့်ဖြားရန်နှင့်ရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်ဟုမထင်ရလျှင်ဆိုက်တစ်ခု၏ထပ်တူအကြောင်းအရာများသည်ထို site ပေါ်တွင်လုပ်ဆောင်ရန်အကြောင်းပြချက်မဟုတ်ပါ။ သင့်ဆိုဒ်သည်ထပ်တူအကြောင်းအရာအကြောင်းအရာများနှင့်ကြုံတွေ့ရလျှင်… ကျနော်တို့အကြောင်းအရာဗားရှင်းရွေးချယ်ရာတွင်၏ကောင်းတစ် ဦး အလုပ်လုပ်ကြသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ရှာဖွေမှုရလဒ်များတွင်ပြသရန်။
ဂူဂဲလ်, ထပ်တူအကြောင်းအရာများ Creating ရှောင်ကြဉ်ပါ
ဒါကြောင့်ပြစ်ဒဏ်မရှိဘူး၊ Google ကပြသဖို့ဗားရှင်းတစ်ခုကိုရွေးလိမ့်မယ် ထပ်တူအကြောင်းအရာများကိုရှောင်ကြဉ်ပါ? သင်အပြစ်ပေးမခံရသော်လည်း, သင် နိုင် နေဆဲပိုကောင်းအဆင့်သတ်မှတ်ရန်သင့်စွမ်းရည်ကိုထိခိုက်စေ။ ဘာကြောင့်လဲ
Google ကအများဆုံးဖြစ်နိုင်သည် ရလဒ်တစ်ခုစာမျက်နှာတစ်ခုဖော်ပြရန်... backlinks များမှတဆင့်အကောင်းဆုံးအခွင့်အာဏာရှိသူသည်ကျန်ရှိနေသေးသောရလဒ်များကိုရလဒ်မှဖုံးကွယ်သွားလိမ့်မည်။ ရလဒ်အနေနှင့်အခြားထပ်ဆင့်အကြောင်းအရာစာမျက်နှာများကိုကြိုးစားရှာဖွေခြင်းသည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အဆင့်သို့ရောက်သောအခါအလဟ is ဖြစ်သွားသည်။
တစ်ခုချင်းစီကိုစာမျက်နှာရဲ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အကြီးအကျယ်အပေါ်အခြေခံသည် သက်ဆိုင်ရာ backlinks ပြင်ပဆိုဒ်များမှသူတို့ကိုရန်။ သင့်တွင်တူညီသောအကြောင်းအရာ (၃ ခုသို့မဟုတ်တူညီသောစာမျက်နှာသို့လမ်းကြောင်းသုံးခု) ပါရှိသည့်စာမျက်နှာ ၃ မျက်နှာရှိပါက၎င်းတို့အထဲမှတစ်ခုသို့ ဦး တည်သော backlink အားလုံးထက်စာမျက်နှာတစ်ခုချင်းစီတွင် backlink များရှိနိုင်သည်။ တစ်နည်းပြောရရင် backlinks အားလုံးစုဆောင်းပြီးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပိုကောင်းတဲ့စာမျက်နှာတစ်ခုတည်းကိုသင့်ရဲ့စွမ်းရည်ကိုထိခိုက်စေတယ်။ ထိပ်ဆုံးရလဒ်များတွင်စာမျက်နှာတစ်ခုတည်းထားခြင်းသည်စာမျက်နှာ ၂ ရှိစာမျက်နှာ ၃ မျက်နှာထက်များစွာသာသည်။
တစ်နည်းပြောရရင် ... ငါထပ်နေတဲ့အကြောင်းအရာသုံးခုရှိတယ်၊ တစ်ခုချင်းစီမှာ backlinks ၅ ခုရှိတယ်ဆိုရင် ... backlinks3ပါတဲ့စာမျက်နှာတစ်ခုတည်းလည်းအဆင့်အတန်းမရှိဘူး။ ပုံတူပွားခြင်းဆိုသည်မှာသင်၏စာမျက်နှာများသည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ယှဉ်ပြိုင်နေပြီးကြီးမားသောပစ်မှတ်ထားသောစာမျက်နှာကိုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းထက်သူတို့အားလုံးကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။
ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုအတွင်းထပ်တူအကြောင်းအရာများထားခြင်းသည်လုံးဝသဘာဝကျပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်သည် B2B ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်လျှင်စက်မှုလုပ်ငန်းများစွာတွင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုများရှိပါကကျွန်ုပ်၏ ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ပစ်မှတ်ထားသောစာမျက်နှာများရှိကောင်းရှိလိမ့်မည်။ ထို ၀ န်ဆောင်မှု၏ဖော်ပြချက်၊ အကျိုးခံစားခွင့်များ၊ ထောက်ခံချက်များ၊ စျေးနှုန်းများစသည်တို့ကိုများစွာသောစက်မှုလုပ်ငန်းစာမျက်နှာတစ်ခုမှနောက်တစ်ခုသို့တူညီနိုင်သည်။ ထိုလုံးဝအဓိပ္ပာယ်စေသည်!
ကွဲပြားခြားနားသောပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ရန်အကြောင်းအရာများကိုပြန်လည်ရေးရန်လှည့်စားနေခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်လုံးဝလက်ခံနိုင်ဖွယ်ကောင်းသောကိစ္စဖြစ်သည် အကြောင်းအရာပွား။ ဒီမှာကျွန်တော်အကြံဥာဏ်ပါ
ထူးခြားသောစာမျက်နှာခေါင်းစဉ်များကိုသုံးပါ - ကျွန်ုပ်၏စာမျက်နှာခေါင်းစဉ်တွင်အထက်ပါဥပမာကို အသုံးပြု၍ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်စာမျက်နှာကိုအာရုံစိုက်သောလုပ်ငန်းနယ်ပယ်ပါ ၀ င်သည်။
ထူးခြားသောစာမျက်နှာ Meta ဖော်ပြချက်များကိုသုံးပါ - ကျွန်ုပ်၏ meta ဖော်ပြချက်များသည်ထူးခြားပြီးပစ်မှတ်ထားခံရလိမ့်မည်။
ထူးခြားသောအကြောင်းအရာထည့်သွင်းပါ - စာမျက်နှာအမြောက်အများကိုပုံတူပွားနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်စက်မှုလုပ်ငန်းကိုခေါင်းစဉ်ခွဲများ၊ ပုံများ၊ ကားချပ်များ၊ ဗီဒီယိုများ၊ ထောက်ခံစာများစသည်တို့ဖြင့်ပေါင်းစပ်ပြီးအတွေ့အကြုံသည်ပရိသတ်ကို ဦး တည်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်လုပ်ငန်း ၈ ခုကိုသင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုဖြင့်ကျွေးမွေးပြီးဤစာမျက်နှာ ၈ ခုကိုထူးခြားသော URLs များ၊ ခေါင်းစဉ်များ၊ meta ဖော်ပြချက်များနှင့်ထူးခြားသောရာခိုင်နှုန်းများပါ ၀ င်ပါက (အချက်အလက်များမရှိသောကျွန်ုပ်၏အူလမ်းကြောင်းသည် ၃၀%) ပါ ၀ င်ပါကသင်မလုပ်နိုင်ပါ။ သင်မည်သူမဆိုလှည့်ဖြားရန်ကြိုးစားနေသည်ဟုဂူဂဲလ်စဉ်းစားနိုင်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်သက်ဆိုင်ရာလင့်ခ်များပါ ၀ င်သည့်ကောင်းမွန်စွာဒီဇိုင်းဆွဲထားသည့်စာမျက်နှာတစ်ခုဖြစ်ပါက၎င်းတို့သည်များစွာသောသူတို့ကိုကောင်းစွာအဆင့်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းစီအတွက်စာမျက်နှာခွဲများကို visitors ည့်သည်များအားတွန်းအားပေးသည့်ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်နှင့်အတူပင်မစာမျက်နှာပင်မထည့်နိုင်သည်။
အဆိုးဝါးဆုံးသောပုံတူများထဲမှကျွန်ုပ်တွေ့ရသည့်အကြောင်းအရာများမှာ SEO ခြံများဖြစ်ပြီးထုတ်ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းသည်ပထဝီအနေအထားတစ်ခုစီသို့စာမျက်နှာများကိုပုံတူကူးယူခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်မြို့တော်များစွာကိုတည်ဆောက်ခဲ့သောယခင် SEO ကုမ္ပဏီအတိုင်ပင်ခံများရှိခဲ့သည့်ယခုခေါင်မိုးကုမ္ပဏီများနှင့်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ သူတို့ဖော်ပြချက်သည်ခေါင်းစဉ်၊ meta ဖော်ပြချက်နှင့်အကြောင်းအရာများရှိမြို့အမည်ကိုအစားထိုးနေရာယူထားသည့်ဗဟိုပြုစာမျက်နှာများ။ အလုပ်မလုပ်ဘူး၊ အဲဒီစာမျက်နှာတွေအားလုံးအဆင့်သတ်မှတ်ထားတယ် ဆင်းရဲစွာ.
အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေဖြင့်၊ သူတို့သည်သူတို့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောမြို့များသို့မဟုတ်ခုနစ်များစာရင်းပြုစုထားသောဘုံအောက်ခြေကိုတပ်ဆင်ထားပြီး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့်နေရာpageရိယာ၏မြေပုံတစ်ခုနှင့်အတူ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောpageရိယာစာမျက်နှာကိုတင်ခဲ့သည်။ စာမျက်နှာနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုနယ်ပယ်စာမျက်နှာများသည်အဆင့်အတန်းတွင်တဟုန်ထိုးတက်လာသည်။
ဤကဲ့သို့သောစကားလုံးများကိုအစားထိုးရန်ရိုးရှင်းသော scripts များနှင့်အစားထိုးထားသောလယ်ယာမြေများကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။ သင်ပြtroubleနာများအတွက်သင်တောင်းဆိုနေပြီး၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်ပါ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်မြို့ကြီး ၁၄ မြို့ကိုလွှမ်းခြုံနိုင်သည့်ခေါင်မိုးတစ်ခုဖြစ်ပါကကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏တစ်ခုတည်းသောခေါင်မိုးစာမျက်နှာကိုညွှန်ပြနေသည့်သတင်းဆိုဒ်များ၊ မိတ်ဖက်ဆိုဒ်များနှင့်အသိုင်းအ ၀ ိုင်း ၀ က်ဘ်ဆိုက်များမှအပြန်အလှန်ပြောဆိုမှုများနှင့်ရည်ညွှန်းချက်များပေးလိုပါသည်။ ဒါကကျွန်တော့်ကိုအဆင့်သတ်မှတ်ပေးလိမ့်မယ်။ စာမျက်နှာတစ်ခုတည်းနဲ့ငါသတ်မှတ်နိုင်တဲ့မြို့ - ဝန်ဆောင်မှုပေါင်းစပ်သော့ချက်စာလုံးအရေအတွက်ဘယ်လောက်မှကန့်သတ်ချက်မရှိဘူး။
သင်၏ SEO ကုမ္ပဏီသည်ဤကဲ့သို့သောလယ်ယာမြေကို script လုပ်နိုင်ပါက Google က၎င်းကိုရှာဖွေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်လှည့်စားတတ်သည့်အပြင်ရေရှည်တွင်သင့်အားအမှန်တကယ်အပြစ်ပေးခံရနိုင်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်, ခြွင်းချက်ရှိပါတယ်။ အကယ်၍ သင်သည်အတွေ့အကြုံကိုကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ရန်တစ်လျှောက်လုံးထူးခြား။ သက်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာရှိသည့်တည်နေရာစာမျက်နှာများစွာကိုဖန်တီးလိုပါက၎င်းသည်လှည့်စားမှုမဟုတ်ပါ။ ဥပမာတစ်ခုအနေနှင့်မြို့လည်ပတ်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ၀ န်ဆောင်မှုသည်အတူတူပင်ဖြစ်သော်လည်းပထဝီအနေအထားအရအတွေ့အကြုံကွဲပြားမှုများစွာရှိသည်။ ပုံရိပ်နှင့်ဖော်ပြချက်များတွင်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။
သို့သော် ၁၀၀% အပြစ်မဲ့မိတ္တူပွားထားသောအကြောင်းအရာကားအသို့နည်း။
အကယ်၍ သင်၏ကုမ္ပဏီသည်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့လျှင်၎င်းသည်၎င်း၏လည်ပတ်မှုများကိုပြုလုပ်ပြီးဝက်ဘ်ဆိုက်များစွာမှထုတ်ဝေသည်ဆိုလျှင်၎င်းသည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဆိုဒ်တွင်လည်းပုံနှိပ်ထုတ်ဝေလိုပေမည်။ ကျနော်တို့မကြာခဏဒီကြည့်ပါ။ ဒါမှမဟုတ်၊ အကယ်၍ သင်သည်ကွန်ရက်စာမျက်နှာကြီးတခုတွင်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးပြီးသင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာအတွက်ပြန်လည်ထုတ်ဝေလိုလျှင်။ ဤတွင်အကောင်းဆုံးသောအလေ့အကျင့်အချို့ရှိပါသည်။
Canonical မှ - Canonical link သည်စာမျက်နှာအားပုံတူပွားကြောင်းနှင့်၎င်းတို့သည်သတင်းအရင်းအမြစ်အတွက်ကွဲပြားသော URL ကိုကြည့်သင့်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်သင်သည် WordPress ၌ရှိပြီး Canonical URL destination ကို update လုပ်လိုလျှင်၎င်းကိုသင်လုပ်နိုင်သည် အဆင့်သင်္ချာ SEO plugin ။ Canonical ရဲ့ URL ကိုထည့်ပြီး Google ကမင်းရဲ့စာမျက်နှာကိုထပ်မပွားဘူး၊ မူရင်းက credit ကိုထိုက်တန်ပါတယ်။ ဤပုံပေါ်သည်။
ပြန်ညွှန်း - နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာ URL တစ်ခုတည်းကိုသင်ဖတ်ချင်သောနေရာနှင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကိုအညွှန်းသို့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလွှဲပြောင်းပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုမှထပ်နေသောအကြောင်းအရာများကိုကျွန်ုပ်တို့ဖယ်ရှားသည့်အခါနှင့်အနိမ့်ဆုံးစာမျက်နှာများကိုအဆင့်မြင့်စာမျက်နှာသို့ကျွန်ုပ်တို့မကြာခဏပြန်ပို့သည်။
Noindex - စာမျက်နှာကို noindex ဟုအမှတ်အသားပြုခြင်းနှင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များမှဖယ်ထုတ်ခြင်းတို့ကရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည်စာမျက်နှာကိုလျစ်လျူရှုပြီးရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏ရလဒ်များကိုရှောင်ရှားစေလိမ့်မည်။ တကယ်တော့ဂူဂဲလ်ကတော့ဒီအချက်ကိုတိုက်ဖျက်ပါတယ်။
robots.txt ဖိုင် (သို့) အခြားနည်းလမ်းများဖြင့်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်ရှိထပ်တူအကြောင်းအရာများအတွက် crawler ကိုပိတ်ဆို့ရန်ဂူဂဲလ်မှမအကြံပြုပါ။
ကျွန်ုပ်တွင်လုံးဝပုံတူပွားထားသောစာမျက်နှာနှစ်ခုရှိပါကကျွန်ုပ်သည် canonical သို့မဟုတ် redirect ကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်၏စာမျက်နှာသို့မည်သည့် backlinks ကိုမဆိုအကောင်းဆုံးစာမျက်နှာသို့လွှဲပြောင်းပေးလိမ့်မည်။
တစ်စုံတစ် ဦး ကသင်၏အကြောင်းအရာကိုခိုးယူခြင်းနှင့်ထုတ်ဝေလျှင်?
လအနည်းငယ်အကြာမှာကျွန်တော့် site နဲ့တွေ့တယ်။ ကျွန်ုပ်၏နားထောင်ခြင်းဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) နှင့်ပတ်သက်သောဖော်ပြချက်များနှင့်အခြား site တစ်ခုသည်ကျွန်ုပ်၏အကြောင်းအရာများကို၎င်းတို့ဘာသာအဖြစ်ပြန်လည်ထုတ်ဝေနေသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ သင်အနည်းငယ်သောအရာများလုပ်သင့်သည် -
site ကိုသူတို့ရဲ့အဆက်အသွယ်ပုံစံသို့မဟုတ်အီးမေးလ်မှတဆင့် ဆက်သွယ်၍ ချက်ချင်းဖယ်ရှားရန်တောင်းဆိုပါ။
သူတို့မှာအဆက်အသွယ်အချက်အလက်မရှိပါက Whois ရှာဖွေသည့်ဒိုမိန်းကို လုပ်၍ သူတို့၏ဒိုမိန်းမှတ်တမ်းရှိအဆက်အသွယ်များကိုဆက်သွယ်ပါ။
အကယ်၍ ၎င်းတို့သည်သူတို့၏ဒိုမိန်းဆက်တင်များ၌သီးသန့်တည်ရှိပါက၎င်းတို့ကို hosting provider နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ သင်၏ client သည်သင်၏မူပိုင်ခွင့်ကိုချိုးဖောက်နေသည်ကိုသူတို့အားအသိပေးပါ။
အကယ်၍ ၎င်းတို့သည်လိုက်နာခြင်းမရှိသေးပါကသူတို့၏ site ၏ကြော်ငြာရှင်များကိုဆက်သွယ်ပါ၊ သူတို့ကသူတို့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုခိုးယူကြောင်းသိစေပါ
အောက်မှာတောင်းဆိုမှု file ဒစ်ဂျစ်တယ်ထောင်စုနှစ်မူပိုင်အက်ဥပဒေ.
SEO ဆိုသည်မှာအသုံးပြုသူများအကြောင်း၊ Algorithms မဟုတ်ပါ
SEO ဆိုသည်မှာအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံသာဖြစ်သည်၊ စိတ်ရှုပ်စရာကောင်းသည်ကိုသင်သာစိတ်စွဲမှတ်ထားပါကအနိုင်ရရန်မှာအချို့သော algorithm မဟုတ်ပါ။ သင်၏ပရိသတ်ကိုနားလည်ခြင်း၊ ပိုမိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှင့်သက်ဆိုင်မှုအတွက်အကြောင်းအရာကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်အပိုင်းလိုက်ခွဲခြင်းတို့သည်အလွန်ကောင်းသောအလေ့အကျင့်ဖြစ်သည်။ algorithms ကိုလှည့်ဖြားရန်ကြိုးစားခြင်းသည်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသည်။
ထုတ်ဖော်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်သည် ၀ ယ်သူတစ်ယောက်နှင့်ပေါင်းစည်းသည် အဆင့်သင်္ချာ.
Tags: canonicalမြို့စာမျက်နှာများခရိုင်စာမျက်နှာများအကြောင်းအရာပွားအကြောင်းအရာပြစ်ဒဏ်မိတ္တူပွားဒေသတွင်း seoတည်နေရာအခြေပြုစာမျက်နှာများနေရာများစွာmultilocationဒဏ္ဍရီnoindexအော်ဂဲနစ်ရှာဖွေရေးအော်ဂဲနစ်ရှာဖွေရေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အဆင့်robots.txtseoseo အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်se ဒဏ္myာရီအကြောင်းအရာခိုးယူ
404 Error Page ဆိုတာဘာလဲ။ ဘာကြောင့်ဒီလောက်အရေးကြီးတာလဲ
သင်၏ကော်ပိုရိတ်ဗီဒီယိုများသည်အဘယ်ကြောင့်မာ့ခ်ကိုလွဲချော်ပြီး၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဘာလုပ်သင့်သနည်း